IFirefox / iChrome: ungakusiza kanjani ukuhlola ukupela ngeSpanishi | Kusuka kuLinux
IFirefox / iChannel: ungasinika kanjani amandla isihloli sokupela ngeSpanishi
Endimeni yami enhle njengomphathi wale bhulogi (nangaphambi kwalokho, ku-Masisebenzise i-Linux) sengikubonile amaphutha isipelingi esesabekayo, kokubhalwa kwalezi zihloko nasemazwaneni, okungididile. Ngalo mqondo, ngicabanga ukuthi leli qhinga lingasiza kakhulu ukuthuthukisa umyalo wethu wolimi. Iqiniso elibuhlungu ukuthi ukungazi ukuthi siziveza kanjani kahle ngolimi lwethu kusibeka ethubeni.
2 KuChromium / Chrome
3 I-Yapa: amaphutha ajwayelekile kakhulu
Ngokuzenzakalelayo, i-Firefox ilungiselelwe ukuhlola isipelingi ngokuzenzakalela. Ungavumela noma ukhubaze lesi sici ngokuya ku- Izintandokazi> Okuthuthukile> Okuvamile. Uma usulapho, khetha inketho Hlola isipelingi njengoba uthayipha.
Ungakusiza kanjani ukuhlola ukupela kuFirefox
Ngemuva kwalokho, kufanele uchofoze kwesokudla ebhokisini lombhalo olithayiphayo bese unika amandla inketho yokuhlola isipelingi (uma kwenzeka ingavunyelwe). Ekugcineni, qhafaza futhi kwesokudla ebhokisini lombhalo bese ukhetha ulimi olufanele.
Izilungiselelo Zolimi Lokuhlola Ukupela kuFirefox
Imininingwane engaphezulu kumabhukwana osizo we I-Mozilla.
KuChromium / Chrome
1. Chofoza imenyu ye-Chrome, evela kubha yamathuluzi wesiphequluli.
2. Khetha Amasethingi> Khombisa izinketho ezithuthukile.
3. Esigabeni izilimi, chofoza Izilungiselelo zokufakwa kolimi nombhalo.
4. Engxoxweni izilimi, khetha ibhokisi lokuhlola Nika amandla ukubuyekezwa kwe-orthographic ukuvula noma ukuvala okuhlola ukupela.
5. Uma ufuna ukusebenzisa isihloli sokupela, khetha ulimi olufanele ohlwini bese uchofoza Sebenzisa lolu limi ekuhloleni ukupela ngakwesokudla. Uma ulimi lungafakwanga, lifake njengolunye lwezilimi zakho "ozikhethayo". Kukhona kungenzeka ukuthi ulimi olungezayo alunaso isichazamazwi sokubheka ukupela. Uma kunjalo, ngeke ukwazi ukusebenzisa isihloli sokupela kulolo limi.
Izinketho Zokuhlola Ukupela ku-Chromium
Ithiphu yebhonasi: uma usebenzisa iwebhu ngezilimi eziningi, ungashintsha kalula ulimi lwesichazamazwi njengoba uthayipha. Kumele uqiniseke ukuthi lezi zilimi zifakiwe kuhlu lwezilimi ezincanyelwayo kungxoxo yokumisa ye- Ulimi. Bese uchofoza kwesokudla ebhokisini lombhalo lapho uthayipha khona bese ukhetha Izinketho zokuhlola ukupela nolimi oluthandayo.
Ngeminye imininingwane, ngincoma ukuthi ufunde imibhalo yokusiza ye- -Google.
I-Yapa: amaphutha ajwayelekile kakhulu
1. Kuthiwa lokho Excelente (nge "xc"), cha Exelente.
2. Haya, Lapho y uthola.
Haya (kusuka esenzweni babe): ukuze yiba lapho amathuba, kufanele ufunde.
Lapho (indawo): lokho kungaphezulu Lapho kokungabaza
UHalla (thola): Wena uthola lapha
3. Kuthiwa lokho uyahamba (ngo "no"), angayi.
4. Vaya y Valle.
Iya (kusuka kusenzo ukuya): ukuze mina Vaya esikoleni kudinga ukuna
UValla (lowo ogxuma kuye): izolo ngigijime u-100 m. nge ezicijile.
5. Ishubhu y Ubenayo.
Ukube (kusuka esenzweni babe): Ubenayo inkukhu pox
Tube (isitsha): ishubhu kusukela ekukhanyeni kwasha
6. Umuntu wesibili ongaphelele
Izwi lakho kusho, wasina, uphumile. Awushongo, wasina, waphuma
7. Kungani - ngoba
Kungani (kuphenywa ngemibuzo):Kungani singama-linuxer kanjena? Angazi, akekho owazi kahle kungani.
Ngoba (incazelo): Sinje ngoba besingeke sibe ngenye indlela.
8. Kwenziwe - qalisa
Kwenziwe (kusuka kusenzo ukwenza): is okwenziwe.
I-Echo (kusuka kusenzo sokuphonsa, kusho ukuphonsa): kuphi qalisa Udoti?
9. Kakhulu y okwanele
I-Vast (isho ukuthi "enkulu"): isifunda kakhulu enkulu kakhulu.
Kwanele (kusho ukuthi "akusasekho"): ¡okwanele ekwenzeni amaphutha esipelingi!
10. Uhlamvu lokugcina lwezenzo ezihlanganiswe nathi.
Akulungile ukusebenzisa "ake sizihloniphe" noma "asihloniphane", into eyiyo okufanele ishiwo ukuthi "asihloniphe thina".
Nokho, bafana, manenekazi: Angikuceli ukuthi ube yiCervantes, noma ngisho nokuba ube ngama-basicists of accents noma okhefana, kepha, njengoba umngane engathi, "isinqamu sesiko!"
Noma kunjalo, ungashiya imibono yakho, ama-puteadas namaphuzu wokubuka.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » IFirefox / iChannel: ungasinika kanjani amandla isihloli sokupela ngeSpanishi
Amazwana ayi-90, shiya okwakho
́Ǵǵǵ́ŕá́áázzzzííaasśś x́ t́ú v’ué́n̨a bolúńtá
Cr30 qu3 n0 func10n4 kakhulu b13n p4r4 4qu3ll0s qu3 l3s gus74n 3scr1b1r 3n h4x0r.
igundane elingenamsila kusho
Uma bebeka i-youtube, chofoza noma yikuphi bese ubeka «1337» konke c0m3n74r10z s3 3zcr183n kanjena
Phendula igundane ngaphandle komsila
umbani I qke kqeria bhala aszi
Lokhu kungenxa yokuthi sihlola isihloli sokupela seFirefox ukubona ukuthi sisebenza kanjani. Okushodayo ukuzilungisa ngokwakho. 🙂
Ukupela kahle kuhle, ngakho-ke siyaqondana kangcono.
Kubalulekile futhi ukubheka isichazamazwi, ngoba endlini yethu sifunde ukunikeza incazelo yamagama, kepha komunye umndeni, noma kwelinye idolobha igama elifanayo lingaqondakala ngenye indlela. Yilapho isichazamazwi sisisiza khona: kuyindlela okufanele ilandelwe ukuze sonke siqondane ngaphandle kwezinkinga, sikhulele noma yikuphi, ngoba ukuqonda nokuxoxisana kuqala ngengqondo esiyinikeza amagama.
Kuyiqiniso ... isichazamazwi singumlingani omkhulu.
Ngokufanayo, kubonakala kuvumelekile kimi ukuveza imizwa yami ngokusetshenziswa namasiko ezwe ngalinye. Ngiyazi ukuthi kuyabakhathaza abanye ukuthi "Ngibhala njenge-Argentina." Ngeshwa, ngeke ngiguqule indlela engiyiyo. Ngiyamelana "neSpanishi engathathi hlangothi" (uma lokho kukhona ngempela).
Impela, ndoda, yilowo nalowo oziveza ngendlela athanda ngayo inqobo nje uma eziqonda yena: Ngingu-Andalusian futhi angishintshi ngalutho, ngaleyo ndlela ngithanda ukuziveza 😛
Isifundo esihle kakhulu sohlelo lolimi 😉 yize kungani - ngoba, njll. kunezincazelo eziningi:
Iqiniso. Njengoba ngichaza kokunye ukuphawula, bekungewona umqondo wokunikeza "isifundo sohlelo lolimi" kepha ukunikeza amathiphu amafushane okufanele uwagcine engqondweni.
Ukupela okungalungile kokuqala okwenzayo kunoma iyiphi i-athikili oyishicilelayo, ngizoba ngowokuqala ukukwazisa.
Ngabe lokhu kuphawula kumayelana nani? Angiboni ukuthi iyini inkinga ngale ndatshana.
I-Errare Humanum Est.
Kunabantu abanesipelingi esihle kakhulu futhi abanganciki kakhulu kubahloli bezipelingi (ukukhuluma iqiniso, kuyabakhathaza kakhulu ukulisebenzisa).
Ngakolunye uhlangothi, kunabantu abangakwazi ukubekezela kangangoba abazihluphi ngokubheka ukuthi isipelingi sabo silungile noma asilungile.
Kokubili kuFirefox naku-Iceweasel nginezihloli zokupela ezilungiselelwe ngeSpanish. Ngakho-ke, ingasebenza ekubhaleni kangcono futhi ingangeni esifundweni esiku-inthanethi sendlela yokuqonda ikhodi "Hoygan" exutshwe ne- "h4x0r" okuku-Facebook.
Uma ufuna ukusithatha njengabantu abangazi lutho, incazelo yokuthi kungani ibingaphelele, njengoba ubona ukuthi "kungani" ingasetshenziswa hhayi embuzweni kuphela. Engizama ukukusho ukuthi kunezindlela zokusho izinto ngokwedlulele. Ukushilo lokho kubalulekile ukuthi unakekele kakhulu isipelingi kwakwanele.
Futhi angiqondi namanje ukuthi kungani uzizwa ukhonjwe kangaka. 😉
Sawubona Elav, ngoba sonke senza amaphutha esipelingi (ngisho nawe muva nje wenze iphutha ukuthayipha ukwehluleka ngo-z) akusho ukuthi inkambo yokupela isipelingi iphonswa ebusweni bethu. Kuthatha nje ukunakekelwa okuthe xaxa lapho ubhala.
Akukhona ngokunikeza izifundo kunoma ngubani. Kubonakale kimi ukuthi kungaba umnikelo omuhle ukugwema ukwenza amaphutha amaningi ngokuzayo. Lokhu yinto engizisebenzisile ukuthuthukisa ukulawulwa kwami ​​kolimi.
Ngakolunye uhlangothi, ngicabanga ukuthi uzovumelana nami ukuthi lawa akuwona amaphutha "amancane" esipelingi enziwe "ukunganaki." Impela, akekho umuntu okhululiwe ekwenzeni iphutha ngezikhathi ezithile, kepha lapho lawa maHORRORS (iningi lawo okuyisikole samabanga aphansi) ephindaphindwa ngokungaguquki, akhuluma ngento ebaluleke kakhulu.
Ukuthembeka ngokuphelele kuwe, ngicabanga ukuthi ukwenza umnikelo "wezamasiko" noma "wokufundisa" kubaluleke kakhulu kunokusabalala kweLinux nesoftware yamahhala (noma ibaluleke njengalena).
Ngizizwa kanjalo-ke. Ngiyethemba angikonanga noma ngone omunye umuntu.
Inhloso yalesi sihloko muhle kakhulu, kepha ngigcizelela ukuthi kufanele ube nobuhle obuningi nokuqonda ukuze usho izinto, ngaphezu kwalokho, ubuqinisekile ukuthi udaba lwakho luzodala impikiswano ngoba emshweni wakho wokugcina ukhulume ngegama elithi isifebe.
Khiqiza ini?! Mnumzane Linux, ngiyacela, uPablo akuyena, ngiqinisekile ngalokho.
NguNkulunkulu, abanumzane besanti abanele, kuyithiphu elula ukusebenzisa umqondisi, nangamazwana akho ...
Ngifisa ukubathinta ...
Ilangabi libonakala. Ngiphumile…
Awazi ukuthi kukhuthaza kangakanani ukuzibulala ngokubhala i-athikili futhi ubizwe ngokuthi "omuhle, umnikelo omkhulu!"
Ngakho-ke intukuthelo yami.
Noma ukuphikisana, im in! i-xD
AKUKHONA ngokunikeza izifundo, kodwa ngokufunda, ngokusebenzisa kahle amakhompyutha esinawo ekhaya noma ekhaya.
Kunoma ikuphi, ukubonile ukwethuka kokushaya amagoli onakho? Ngicabanga ukuthi lesi sifundo esincane singakusebenzela.
I-semicolon ngayinye isendaweni yayo.
Angazi ukuthi ukuthathaphi ukuthi ngikuthathe njengongazi. Uma uyithatha kalula, leyo inkinga yakho, hhayi eyami.
Ngakolunye uhlangothi, ngenza igalelo LOKWAKHA ukuze sonke (sonke) sinake kakhulu lapho sibhala (nami ngiyazifaka). Yilokho ingxenye yendatshana ekhuluma ngokuthi ungakuvumela kanjani ukuhlola ukupela kuFirefox / Chromium imayelana nayo.
Bengingahlosile ukubhala i-athikili ephelele ngemithetho yokupela isipelingi, kepha ukunikeza izeluleko ezijwayelekile ngamagama engiwabonile adala izinkinga.
Sawubona, Mnu Linux. Ci kakhulu kisaz ezkrivaz komo laz yamaz. I-yama komo llo
«Ungavumela noma ukhubaze»
Kuyadabukisa ukuthi awusebenzisi lo msebenzi kahle?
Angiqondi. Ngabe ungacacisa kakhudlwana? Ngiyabonga.
Ungakwazi Uxolo, luphi lolo limi? gaucho? I-LOL.
Bheka lokhu kuyibhulogi ekude ukuze okungenani ufunde ukudida izenzo, akunjalo? ngoba akuthina sonke esijabulela indlela yokukhuluma yase-Argentina, noma befihla ngemuva komqondo wokuthi isendulo, ukubingelela.
Kungenxa yesimo se-VoseOo, okungalungile ngoba kufakwa esikhundleni sezabizwana nezenzo ngeSpanishi
Sengiphetha ubhala ngendlela eyiyo
Ngiyajabula ukwazi ukuthi lokhu okuthunyelwe kufeze injongo.
I- "bonkeo" yamukelwa yi-RAE njengevumeleke ngokuphelele futhi ilungile.
Ngabe ubonile ukuthi kuhle kanjani ukufunda okusha?
Umhlaba awupheli eSpain.
Yize igama elithi vos lisuselwa kutemu elithi vocé elivela e-Portuguese.
i-voçe, ngaphandle kwe-accent ne-cedilla
Wena / uhamba -s
Uhamba -uhamba / Uhamba -s
Okwesenzo sokuhlanganiswa kwesibili okuphela ku - izinguquko zokuhlangana:
Lapha e-Uruguay asisebenzisi eyakho. Sisebenzisa "nina" futhi ukusetshenziswa kwesixhumi kwesithathu kusetshenziswa.
Ngishiya ikilasi nawe, kodwa isilima sokuphawula kwakho ...
Kubi yini ukuthi umuntu abhale njengoba ekhuluma? Futhi ngiqonde ukukhuluma ngolimi lwamagama ase-Argentina, oluqashelwa ngokomthetho olimini lwaseSpain, ukuthi awuluthandi kangako, inhloso yakho kuphela, noma nini lapho uphawula, ukuyiphikisa.
Ahh, njengoba uthanda, uqobo lwazo zonke izinto no-lunfardo babonakala kimi kahle, angizukuya emininingwaneni ukuze ngidale impikiswano, ngamafuphi, ngayinye ngendaba yayo, futhi akumele iphikisane, kulungile ? ukubingelela.
bangabonakala kuwe ukuthi ufunani
kepha yizinhlobo ezifanele zeSpanishi
Wena umubi cocolito ngendlela okuvama ngayo igama ukwamukela ukuthi akulungile futhi ngalokhu awufiki ndawo. Njalo ufuna izinwele zeqanda lelo mania male.
Kubonakala kimi okuthunyelwe okuhle kuyinto ewusizo impela
Kodwa-ke, sengivele ngidala impikiswano (hhayi ngenhloso) futhi lokhu kubonakala kimi ukuthi akuyona inhloso ye-athikili, ngokubona kwami ​​yisihloko kuphela esizosisiza ngokupela kwethu, okulungele thina sonke
"Khetha" futhi njengoba u- @ Codeocolio esho ngokuthi "ungakwazi" akuyona indlela yokulungisa izenzo, okungenani lapha eSpain azisetshenziswa ngaleyo ndlela. E-Argentina (noma kwezinye izindawo eziseNingizimu Melika?) Ngabe zisetshenziswa kanjena? Inhloso iyaziswa, ngaphandle uma ingekho imisho efana nale: Hoygan hamygos k tal stan? (Mys hojos ahhhh)
xD, ukumisa izenzo cha, ukuzihlanganisa, mea culpa
Le ndlela ethile yokukhuluma ingenxa yesimo se-Voseus. Isetshenziswa emazweni amaningana futhi yehlukile ezweni ngalinye lawo. Ukuthi "ungakwazi" AKULONA iqiniso.
Bheka lesi sixhumanisi
Akusikho okokuqala ukuthi ngithole lolu hlobo lokuphawula futhi angikholwa ukungazi okukhulu okukhona ngale ndaba, ikakhulukazi eSpain.
I- "onseo" isetshenziswa emazweni amaningi aseNingizimu Melika (i-Argentina, i-Uruguay, njll.) Futhi yamukelwa yiRoyal Spanish Academy.
Ngikushiya isixhumanisi semfundo kakhulu:
Ungaphambanisi "konkeo" ne- "lunfardo."
Noma kunjalo, leyo akuyona indlela oziveza ngayo, akusho ukuthi akulungile, akunjalo? Kufana nokusho ukuthi isiPutukezi saseBrazil asilungile ngoba akufani nalokho abakukhuluma ePortugal.
Sibonga kakhulu kini nobabili ngezimpendulo zenu!
ESpain kukhona ukungazi ngokuphelele ngale ndaba.
Bengingazi ukuthi yamukelwa yiRAE, awusoze wayolala ungazi okusha.
Kuyini i-lunfardo? Uxolo ukungazi kwami.
Bengicabanga ukuthi akulungile noma ngabe kuyasetshenziswa, ngiyaxolisa, bekungeyona inhloso yami njengoba ubona ekuphawuleni kwami ​​ukugxeka noma ube yi "troll"
Lapha eSpain kumayelana "nawe" nokukhuluma nabantu abadala noma abahlonishwayo kuthiwa ngawe. Indlela yethu yokukhuluma sisebenzisa isabizwana soqobo "wena" sifana nomuntu wesithathu (yena / yena).
Okunye ukwangana kwethu sobabili 🙂
ULunfardo uyindlela yokukhuluma "engafundile".
Ngakolunye uhlangothi, i- "onseo", ayihlangene nakancane ne-lunfardo futhi isetshenziswa ngendlela ejwayelekile (kulawo mazwe). Phakathi kwezinye izinto, kusho ukusetshenziswa kwe- «vos» esikhundleni se- «tú», ngokuguqulwa okulandelayo ekuhlanganisweni kwesenzo: sithi «vos caminás», esikhundleni se- «tú caminas».
Ngokunjalo nase-Argentina (naseLatin America ngokujwayelekile) akusetshenziswa wena "wena", kepha "wena": esikhundleni sokuthi "uhamba," sithi "uyahamba."
EMaracaibo, eVenezuela futhi "i-vocea" noma i- "bonkea" (sebengididile vele) naseCali, eColombia, yize kuyinto ehlukile. Ngicabanga ukuthi babiza enye ngokuthi "ngomlomo" kanti enye "nge-pronominal" kepha ngokweqiniso angiwazi umehluko osemthethweni nowezemfundo phakathi kwalokhu okubili; Ngiyazi nje ukuthi zihlukile kancane. Ngakho-ke, njengoba ubona, kusakazeke impela. Into enhle ukungayiboni njengento engeyinhle kepha njengokuhlukahluka okucebisa ulimi lwethu oluhle. Okwesibili okukhulunywa kakhulu eMhlabeni (ngemuva kweMandarin) nangaphezulu kwesiNgisi (ngokusho kweWikipedia).
URené Lopez kusho
Futhi siyisebenzisa iParaguay ..
Futhi bahlala njalo bengiyisa e-Argentina lapho ngibhala ngaleyo ndlela.
Futhi enginakho ukuzivimba ekubhaleni ngolimi lwami lwasekhaya, isiGuaraní.
Okushiwo ngeSpanishi: Ngiyabonga umlingani / umngani, ngokuthunyelwe.
Phendula uRené López
kusho uPablo impendulo enhle kakhulu emhlabeni. Uma kungenjalo, kuyindawo yonke imikhonzo ye-haha
Uyazi ukuthi umhlaba awupheli eSpain, uyaqonda? wazise owesilisa! Ngingasho nje lokho!
˙ǝʇuǝɯɐʇɔǝɹɹoɔ ɹıqıɹɔsǝ ɐzuǝıɯoɔ ǝʇuǝƃ ɐl zǝʌ ɐuǝnq ɐun ǝp ıs ɹǝʌ ∀ ˙ʇsod lǝ lɐıuǝ פ
Kepha ngokujulile, okuthunyelwe okunjalo kwakudingeka. Maningi kakhulu amaphutha esipelingi, hhayi kuphela kokuthunyelwe kepha kumazwana abekiwe. Uyakhathala.
Ngilahlekile, ngicabanga, "uma kungenjalo" nokuthi "kodwa" ukuthi abantu bashintshana ngokungakhethi (akuyena wena kodwa mina / uma ungangitsheli, angazi) futhi u- "had" osebenza kuphela lapho engena esikhundleni se- ( bekufanele -> bekufanele) kepha abantu bayisebenzisa njengobuningi (okungekho) besenzo esithi "have" (kwakukhona ukufa okuningi -> kwakukhona ukufa okuningi)
Okuthunyelwe okuhle kakhulu!
Ushaye khona! Ukunikela okuhle kakhulu… nakho lokho kuvame kakhulu.
ostia, umklomelo wokuthunyelwe okuphambana kakhulu konyaka hahaha
Haha! Kuhle. Ngathanda. 🙂
Wawukubhala isikhathi esingakanani lokho?
Okungithathile ukuthi ngiye kuGoogle ukuthi yiliphi ikhasi elikwenzile
Okumangalisayo. Ngiyethemba ukuthi isihloli solimi singasiza futhi lapho ubhala ekhanda lakho.
Okokuqala, ukubingelela kuwo wonke umphakathi. Ngifuna ukukubeka kucace ukuthi akuyona inhloso yami ukudala impikiswano, empeleni lolu hlobo lokuthunyelwe ngiluthola lukhulu, kepha ngikuthola kuyindida ukuthi isihloli sokupela asinamsebenzi ngezibonelo ozibeka.
Iqiniso. Ngangingakaze ngicabange ngakho.
Noma kunjalo, lokho kuvuselela kuphela isigaba sokugcina seposi (sigxekwe abanye).
Ngivumelana ngokuphelele nombhali wale ndatshana. Uma othile ethi ufuna ukusizwa kunoma yisiphi isithangami futhi engabhali kahle, ngeke kube lula ukumsiza. Kunabantu, ngeshwa, noma ngenxa yezizathu ezithile, ababanga nalo ithuba lokuya ekilasini futhi babhale ngokungagwegwesi. Kepha into ehlekisa kakhulu ukuthi abafuni ukuzama ukwenza umbhalo oqondakala kahle. Vele, okubalulekile ukuzenza uqondwe, kepha kwesinye isikhathi ngiyakwazi ukufunda okuthunyelwe lapho kungekho khona ikhefana noma isikhathi esisodwa esibhalwe ngombhalo ongapheli. Lapho abantu ababili abazama ukuxhumana bengakhulumi ulimi olufanayo, ukulingisa noma ukushukuma komzimba kubaluleke kakhulu, kepha endaweni enjenge-Intanethi, lokhu akuvunyelwe. Kungakho kubalulekile ukubhala, angisho kahle, kepha okungenani ngokulingene, ngoba sonke sizozuza kulokhu. Uxolo uma othile ephatheke kabi, kodwa lokho bekungeyona inhloso yami.
Nansi-ke itshe eliyigugu kimi.
Madoda, ngabe kunenkinga yokuthi uPablo noma othile (ahem, mina ngokwesibonelo) ufuna ukushiya umyalezo ongafakwanga kulokho akubhalayo? Angicabangi kanjalo.
Ubuwazi ukuthi kubuhlungu kanjani ukulungisa ukwesabeka kwesipelingi kwabantu abaningi kangaka abafuna ukuthumela? Noma okubi kakhulu, funda ukuphawula kwabasebenzisi abaningana ababonakala bebhala ngezinqa zabo? Konke kuhamba kimi lapha, hhayi ukuvikela uPablo, kepha ngenxa yekhono lokufinyelela emazingeni e-idiocy ngaphezulu kwe-9000, kulahleke.
Okokuqala iziqhumane ezimbalwa ziphawula nge-onseo, okuyinto ejwayelekile ngokuphelele, zisendleleni efana nezingqinamba ezenziwa ngama-gringo esiNgisini, uyazi, «ngikhona, ngikhona»… ungakwenza, ungakwazi, ungakwazi. Ungaba yisilo ngempela empilweni uze ufune ukugxeka lezi zinhlobo zezinkinga? Le ndoda ithi kungakuhle kuwo wonke umuntu, kubandakanya naye uqobo, kuthi abafana abane baphume "bakhubekile" ngoba bacabanga ukuthi batshelwe ukungazi. Madoda, ngiyakungabaza impela ukuthi inhloso yokuthunyelwe nguPablo ukunitshela ukuthi anazi lutho, kodwa ngiyaqiniseka ukuthi nikhombisa ukungazi kwenu ngokuzizwa nikhonjwe okuthile okwakungekho kini, njengokuthi ubani othi lapha «okungafanele akayesabi.
Ingabe bacasulwa? Ubisi olubi! Angisiboni isifiso noma inhloso yokukhubekisa lapha, shiya ukuzwela, ukuthi konke okushicilelwe manje, ngengxenye enhle, kuvame ukuba "kuyacasula", sicela, kwanele ukungabi nanyazi okunjalo.
Ngaphezulu kuka- + 9000!
Lokhu kungikhumbuza umbhalo engikutholile kudala futhi ngangiyi-xD ehlekisa kakhulu
Kuhle kakhulu, ngiyinikezile futhi uma isebenza ee
KuChromium yami, leyo nketho isivele iza kimi ngokuzenzakalela.
I-Off-Topic: Manje sebethuthukise inkinga yokunikeza amakhasi ewebhu ku-Debian Chromium.
iyiphi inguqulo oyithuthukisele ku-Chromium?
Kuya kunguqulo 29.
Okuthunyelwe okuhle kakhulu futhi okuphelele kakhulu. Ikakhulu ngenxa yohlu lwamaphutha esipelingi esivame kakhulu (noma ama-horror). Ukuthi kunabantu abaningi abathembele kakhulu kumhloli wokuhlola futhi bacabange ukuthi babhala "ngokunembile" bekusebenzisa.
Futhi njengoba ukulento ubhala kanjani ulele noma ulele ?????? ngicela uma unomusa ongichazayo
Bengingazi ukuthi "kungani" nokuthi "kungani": O
Ngingasisebenzisa kanjani isipelingi esifanele se-pc yami —– nokuthi yini
Isifundo esihle! Ngiyabonga ngokuthatha isikhathi sakho ukukwenza nokukushicilela; kungikhonza kakhulu.
uyabona, nginenkinga ngalokhu kwalungisa kwithebhulethi…. ngeshwa angazi ukuthi ngikwazi kanjani ukunika amandla eyodwa. Ngizamile ukulanda izengezo ze-firefox kepha azisebenzi kahle.
Ngingakujabulela kakhulu uma ungangisiza lapha ngangokunokwenzeka
Usuvele wawazi wonke amaYapas kepha kuhlale kukhona umuntu ongenalwazi owenza amaphutha angajwayelekile kakhulu njengokuthi sawubona ngaphandle kuka h nezinye izinto ezesabekayo angikaze ngibe ngumuntu ophambanisa isipelingi nama-accents kepha noma ngabe uyisilima kangakanani awukwazi ukuwenza lawo maphutha uNkulunkulu wami D : njengeyapa inombolo 1
Amazwana amahle kakhulu. Ukubhala kahle akubizi lutho ... Uma izwe lakho lingenalo uhlelo oluhle lwemfundo, kungcono ufunde wedwa ... Kuyihlazo kwabanye ukubona imibhalo ethile ... egcwele amaphutha ... Esikhathini esingaphansi konyaka, uma unentshisekelo, ungakwazi funda kahle ulimi olisebenzisayo futhi kudingekile kuphela ukuthi ube nentshisekelo ngesakhiwo salo, imvelaphi yalo, ukusetshenziswa kwalo ... Futhi akusona izaba, isibonelo, ukungasebenzisi i-c njengaseSpain eSpain: amaCanaries, ama-Andalusians, ama-Extremadurans, hhayi ama balibiza njengamaCastilians, kepha balibhala kahle ...
Lokhu ukutshelwa ngumuntu obhala izilimi ezimbili kahle; ngendlela ozifundisa ngayo ...
UGabriela ramirez kusho
WOW kuhle ngiyabonga kakhulu (=
Phendula uGabriela Ramirez
Ntokazi li kusho
Ngiyabonga!!!!!! Incazelo yakho ingisize kakhulu !!! Halala !!!!!! 🙂
Phendula uLady Li
UDixon Scola kusho
Siyabonga ngosizo lwakho, impumelelo.
Phendula ku-Dixon Scola